धेरै दिन टिकेन निर्यात बढेको खुसी
धेरै दिन टिकेन निर्यात बढेको खुसी कश्मीर मामिलामा जान्ने पल्टिँदा मलेसियालाई ‘रेड कार्ड’
जनतापाटी डेस्क शुक्रवार, पुष २५, २०७६, ०५:२५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । केही दिन पहिले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले यो आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालले भारतसँग व्यापारघाटा कम गरेको खुसीयाली बाँड्यो । उसले दिएको तथ्याङ्कमा नेपालले ९.५ प्रतिशत आयात कम गरेको र निर्यात ४८.६ प्रतिशतले बढाएको उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा व्यापारघाटा ६.३ प्रतिशतले घटेको केन्द्रले जनाएको छ । उसले निर्यात बृद्धिको अग्रपंक्तिमा पाम आयललाई राखेको थियो । यो पाँच महिनामा निर्यातमा मुख्य हिस्सा पाम आयलयकै देखियो, २४ प्रतिशत ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा पाम आयलको निर्यात ७५६.१ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको भन्दै खुसीयाली बाँड्दै थिए, सरकारी अड्डाहरु । तर, त्यो खुसीयाली धेरै दिन टिकेन । अहिले भारतले प्रशोधित पाम आयलको आयातमा रोक लगाइदिएको छ । नेपालबाट पाम आयल बोकेर गएका गाडी नाकामै रोकिएका छन् । भारतले पाम आयलमा रोक लगाएसँगै नेपाली व्यवसायीले तेल उद्योगमा गरेको सात अर्ब बढी लगानी जोखिममा परेको छ ।
‘व्यापारघाटा कम, निर्यातमा सुधार’
भारतले नेपालबाट आयात गर्ने पाम आयल रोक्नुको कारण ‘कुनै कैफियत वा नेपालसँगको असमझ्दारी’ भने होइन । भारतमा सबैभन्दा बढी पाम आयल निर्यात गर्ने मलेसियाको पाम तेल रोक्दा त्यही लपेटमा परेको हो, नेपाल । भारतमा पाम आयल निर्यात गर्ने मुलुकमा नेपाल तेस्रो–चौथो स्थानतिर छ । तर, भारतले मलेसियाको पाम आयल रोक्दा अन्य मुलुकहरु प्रभावित हुनुपर्ने कारण छैन, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम प्रसाद घिमिरेले जनतापाटीसँग भने, ‘हाम्रो त निर्यातको हिस्सा धेरै छैन । हामीलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । जम्मा ४–५ हजार करोडको निर्यात हुने हाम्रो पाम आयल विहार र उत्तरप्रदेश भन्दा उता जाँदैन । रोक्नुको कारण नै छैन । फेरि हाम्रो मुलुकसँग अहिले कुनै असमझदारी रहेको अवस्था पनि होइन । सरकारले यो विषयमा पहल गर्ने वित्तिकै कुरा मिलिहाल्छ ।’ सरकारले यो विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको छ ।
मलेसियासँग किन रिसायो भारत ?
मलेसिया भारतमा पाम आयल निर्यात गर्ने खास मुलुक हो । नेपालमा पनि कच्चा तेल उत्तैबाट आउने हो । तर, एकाएक भारतले मलेसियासँग त्यत्रो तेल आयात रोक्नुको पछाडि अन्य कारण खासै छैनन् । मूल कारण हो, राजनीतिक असमझदारी । गएको साउन अर्थात् ५ अगष्टमा भारतले ‘कश्मीरलाई विशेष सुविधा दिनका लागि सन् १९५० मा भारतीय संविधानमा थपिएको धारा ३७० र ३५ ‘ए’ खारेज गर्दा’ मलेसियाले विरोध गरेको थियो । त्यसैबेलादेखि मलेसियासँग रिसाएको हो, भारत । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्र ६ वर्ष यताकै खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेकाले आयात घटाउने रणनीति पनि यसको सहायक कारण हुनसक्छ ।
भारतीय अर्थतन्त्र साढे एक वर्षदेखि लगातार ओरालो लागेको छ । जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनामा त भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा खुम्चियो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र तीन वर्षयता औषत झण्डै ६ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । त्यसैको खुसीयालीमा सरकारले यो वर्ष साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ ।
तर, निर्यातको आधा हिस्सा ओगटेको पाम आयल भारतले रोक्ने वित्तिकै भने सरकारको लक्ष्यमा खतराको घण्टी बजेको छ । अर्कोतिर यो पल्ट राजश्व एक खर्ब कम उठ्ने अनुमानले झन् सरकारलाई आफ्नै लक्ष्य संशोधन गर्न दबाब परिसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन नेपालमा अहिले ऋणविस्तार साँघुरिएको छ भने आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्र सिथिल देखिन्छ ।
खुल्न लागेका उद्योगलाई सुरुमै ‘एल्लो कार्ड’
मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार विराटनगरका पाँच वटा तेल उद्योगले भारतमा पाम आयल निर्यात गरिरहेका थिए । र, पाम तेल निर्यातमा बढोत्तरी आएपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अन्य चारवटा उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् ।
तर, भारत र मलेसियाबीचको असमझदारीका कारण उनीहरु सञ्चालनमा आउनु भन्दा पहिल्यै ‘एल्लो कार्ड’मा परेका छन् । सारडाका अनुसार सरकारले तत्काल पहल नगर्ने हो भने उनीहरु ‘रेड कार्ड’मा पर्ने अथवा लगानी डुब्ने खतरामा छन् ।
पहिलो पटक सरकारी कार्यालयनै ठगिको सिकार शुक्रवार, चैत्र ७, २०७६, ०३:२६:००
उपत्यकाबासी भन्छन्, ‘चौतारी, फल्चा छैनन्, भएका पनि अतिक्रमणमा’ विदेशतिर पाँच १० मिनेटको फरकमा त्यस्ता खुला ठाउँ हुन्छन् जहाँ हरियाली पनि हुन्छ, आराम गर्न पनि। उपत्यकाका त्यस्ता ठाउँ बनाइएका छैनन्। अहिले सार्वजनिक खुला स्थानको अतिक्रमण हुने क्रम बढेको छ। त्यसलाई रोकेर उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सोमवार, बैशाख १६, २०७६, ०७:०२:००
भारतीय मोटरसाइकल लिइ नेपाली नागरिकताको निवेदन ! भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । कार्यालय परिसरमा दैनिक १२ देखि १५ वटासम्म भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको हुन्छ । ती मोटरसाइकलमा आउने मानिसहरुले नागरिकता लिँदा चाहिने कागजात मिलाउँदै गरेको दृश्यसमेत देखिने गरेको छ । शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६, ०४:४२:००
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको निमित्त सिइओमा श्रेष्ठ नियुक्त
एनसेल अब सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण
कोरोना महामारी - ‘स्वदेश फर्कन बाध्य आप्रवासी कामदार’
आजबाट सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमाको शुरुवात